बिहान उठ्नसाथ हामी के गल्ती गर्छौं ? | सुदुरपश्चिम खबर
बिहान उठ्नसाथ हामी के गल्ती गर्छौं ?
हत्तपत्त उठेर काममा लाग्नु
ब्रेकफास्ट ताजा हुनुपर्छ । चिया, बिस्कुट जस्ता खानेकुराभन्दा भिजाएको बदाम, रोटी, फल सेवन गर्नुपर्छ ।
आँखा खोल्नसाथ मोबाइल चेक गर्नु
उठ्नसाथ मलमुत्र त्याग नगर्नु
कतिपय उठेर शौचालय जान अल्छी मान्छन् वा जाने अभ्यास गर्दैनन् । तर, बिहान उठेर मनतातो पानी पिइसकेपछि मलमुत्र त्याग गर्नुपर्छ । किनभने यसो नगर्दा शरीरमा बिकार फैलन्छ । त्यसैले बिहान उठेपछि आरमपूर्वक मलमुत्र त्याग गर्नैपर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
चियासँग बिर्सिएर पनि नखानुहोस् यी ३ चिजहरु !!
प्रतिरोधी क्षमता विकसित गर्ने ८ प्राकृतिक तरिकाहरु, जीवनशैलीमा गर्नुहोस् यस्ता परिवर्तन !!